summit micro-finance(summit micro-finance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
समीटको लाभांश दरमा गिरावट, २३.५३% बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाण्डौ । समीट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले लगानीकर्तालाई दिने बोनस घटाएको छ । यो कम्पनीको भदौ ३१ गते बसेको संचालक समितिको १६९ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट २३.५३ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनका लागि १.२४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । अघिल्लो वर्ष यो कम्पनीले ३४.४८ प्रतिशत बोनस सेयर र...
खुल्यो १७०० माथिको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर, कहाँबाट दिने आवेदन(सूचिसहित) ?
काठमाण्डौ । समीट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले बिक्री नभएको २६ हजार ५ सय ४९ कित्ता सेयरको आजदेखि लिलामीबाट बिक्री खुलाएको छ । यो माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ४ हजार ८५ कित्ता साधारण सेयर र २२ हजार ४ सय ७६ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीको प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दैछ । समीटले गत भदौ २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म हकप्रद सेयरको...
प्रतिकित्ता १७०० बढी मूल्यको सेयर सस्तोमै उठाउने अवसर, उपत्यकाबाहिरबाट पनि आवेदन दिन मिल्ने
काठमाण्डौ । समीट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले बिक्री नभएको २६ हजार ५ सय ४९ कित्ता सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले आगामी मंसिर ४ गतेदेखि अबितरित सेयरको लिलाम बिक्रीका लागि आवेदन खुलाउने भएको हो । यो माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ४ हजार ८५ कित्ता साधारण सेयर र २२ हजार ४ सय ७६ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीको...
काठमाण्डौ । समीट माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना सेयरधनीलाई मालामाल बनाउने अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को खूद नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ३४.४८ प्रतिशत बोनस सेयर, १०.५२ प्रतिशत नगद लाभांश र बोनस सेयर कर प्रयोजनका लागि आवश्यक १.८१४ प्रतिशतले हुन आउने नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको छ । कम्पनीको...
समीटका सेयरधनी बन्ने भए मालामाल, २२०० रुपैयाँको सेयर एकसयमै पाउने !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रति कित्ता २२०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सेयर १ सय रुपैयाँमै पाइयो भने तपाई उफ्रिनुहुुन्न ? हो, समीट माइक्रो फाइनान्सका सेयरधनीलाई यस्तै अवसर खुल्दैछ। यो माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले आगामी भदौ २९ गतेदेखि आफ्ना सेयरधनीका लागि १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रदको बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ...
समीट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले ४७ प्रतिशत बोनस पाउने
काठमाण्डौ । समीट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २.३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । कम्पनीको भदौ २४ गते बसेको बोर्ड बैठकले आफ्ना सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट सेयर र नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको हो । आइतबार यस बिषयमा नेप्सेलाई जानकारी...
लगानी भित्र्याउन बेलायत पुगेका अर्थमन्त्रीसँग बेलायती मन्त्रीको भेट, सहयोगको आश्वासन